SANDUUQA DAYRTA: GOOYN, BEERITAANKA, TRANSPLANTING, MANJOOYIN IYO DARYEEL KALE KA HOR INTA KULAYLKA - SOOSAARKA DALAGGA
Noocyada daryeelka ee sanduuqa dhirta xilliga dayrta: beeritaanka, ka goynta iyo qaadidda
Boxwood waa mid ka mid ah dhirta ornamental ee ugu caansan si loo qurxiyo aagga. Waxaa si weyn loo isticmaalaa sida muuqaal qurxoon ee naqshada muuqaalka.
Waa geed caan ah oo caleemo cagaaran ku jiri doonto sanadka oo dhan.
Boxwood - Xaadir dhir dheer, oo leh daryeel ku haboon sanduuqa, wuxuu ku noolaan karaa 500-600 sano! In dabiiciga, waxaa jira 30 nooc oo warshad this, laakiin in beerta ornamental kaliya hal nooc waa guusha.
Macaamiisha ka soo jeeda bariga koonfureed waxay si fiican uula qabsadeen cimilada dhexe, laakiin waxay u baahan tahay daryeel. Muddooyinka muhiimka ah waa xilliga dayrta iyo jiilaalka.
Boxwood: goynta dayrta, beerashada iyo dhirta beerista.
Maaddaama boodhadhku uumi baxo guga, si loo abuuro dayr wanaagsan. Wixii rooting ku filan, dhirta u baahan tahay ilaa hal bil ah.
Sidaa darteed, waqtiga degitaanka waa in la doortaa sidaas si ay xididada u leeyihiin waqti ay adag tahay ka hor dhaxan ugu horeysay. Dabeecadda carrada maaha wax badan, farqiga keliya ayaa ah in geedku u dhaqso badan yahay ciidda bacrin ah.
Ha ku beerin sanduuqa alaabta meelaha biyaha dhulka hoostiisa ay aad u sarreeyaan waxayna u muuqdaan inay istaagaan. Marshland waxay burburin kartaa warshad.
Goobta beeraha ee dayrta
Sidee loo beeraa sanduuqyada dayrta? Maalinta ka hor intaan la dhicin, seedling ee dheriga waa in la waraabiyo si gaar ah, tani waxay kuu oggolaaneysaa in aad si fudud oo si nabad ah uga saari kubad dhoobo leh xididada. Ceelka beeritaanka waxaa loo qodaa si ballaadhan oo qoto dheer oo ka samaysan kubad dhoobo ah, qiyaastii 3 jeer.
Dhulka laga helo fossa waa mid faa'iido leh, sidaas darteed waa in si taxadar leh loogu duubaa tuubo. Sidaas darteed xididdada seedling ma ku dhibtoodaan qoyaan dabacsan, xagga hoose ee fossa waxaad u baahan tahay inaad sameyso lakab saaro. Perlite waa u fiican yahay tan, lakabka 2-3 cm noqon doonaa ku filan.
Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad isku darsatid perlite dhulka dhulka la gooyey, oo ah 1: 1 miisaanka, iyo ku shub daloolka si aad u sarreeya sarajoogga kubbadda boodboodka ee boodhka ah ee gaadhaya dhulka dushiisa. Diyaarinta seedling ee godka, buuxi isku dar ah meelaha bannaan oo hareeraha ah. Isla mar ahaantaana, si looga fogaado hareeraha hareeraha xididada, waxaa loo oggol yahay in si yar wax looga qabto carrada.
Ka dib markaad degto geedka waa in si fiican loo daadiyo. Si taas loo sameeyo, waxaa haboon in la isticmaalo biyaha roobka, haddii ay jiraan biyo tuubo oo keliya, markaa waa in loo oggolaadaa inay istaagto ugu yaraan 24 saacadood.
Quudinta koowaad waxaa la sameeyaa bil gudaheed, laakiin haddii jiilaalka yimaado, markaa nidaamkan waa in dib loo dhigaa illaa guga. Inta lagu jiro xilliga koritaanka, geedka waxaa la quudin karaa hal mar toddobaadkii.
Waxaad ka baran kartaa wax badan oo ku saabsan diyaarinta sanduuqa ah ee jiilaalka halkan.
Sidee loo dhejiyaa sanduuqa beeraha dayrta? Sanduuq qaan-gaar ah ayaa sameeya xubin ku-tallaalidda da 'kasta oo wanaagsan, iyo wakhti wanaagsan oo loogu talagalay transplanting ayaa loo tixgeliyaa laga bilaabo Luulyo ilaa Nofembar.
Isla markiiba ka dib transplanting sandwich ee dayrta, dhirta u baahan tahay waraabin degdeg ah.
Si kor loogu qaado koritaanka, sanduuqa waxaa lagula talinayaa inuu dib u soo celiyo 3-4 sano kasta illaa duurka uu ku filan yahay.
Qaadista warshad qaangaar ah ayaa lagu sameeyaa si la mid ah sida beeritaanka bilawga ah ee dhulka furan, taas oo ah, si wadajir ah oo kale oo leh dhulka hoostiisa. Ka dib markii loo bedelo, waa lagama maarmaan in la sameeyo mulching jilif ee geed.
Dib u dhigid iyo ku-tallaabid
Goobta sanduuqa dhaadheer ee guriga oo dayrta. Gawaarida beeritaanka dayrta in la diyaariyo horraantii Sebtembar.
Waa inay noqotaa qiyaastii 7-10 cm oo dhererkeedu yahay 2-3 barood. Caleemo hoose ayaa laga saaraa, oo kaliya ka tagaysa kuwa sare.
Gooyn waxaa lagu beeray isku dar ah dhulka iyo peat, 1: 1 saamiga. Marka hore, waa mid waxtar leh in lagu daboolo geedo leh barmiil dhalooyinka ama filim. Sida caadiga ah, qiyaastii 90% gooyn ayaa si guul leh u qaadanaya xidid.
Ku saabsan 3-4 toddobaadkii gooynta waxay qaadan doontaa xidid, caleemaha yaryar waxay u muuqan doonaan jirridda. Waa wakhti lagu beddelayo goob loogu diyaargaroobey beerta.
Laakiin haddii ay sabab u tahay geedo aan lahayn waqti si aad u adkeyso, waxaa fiican in aan khatarta ah iyo in aan ku beeran dhulka u furan. Waxay u fiicantahay inay u ogolaadaan inay jiilaalka ku qaataan dheriga, xaaladaha qolka, iyo iska saaraan beeritaanka illaa xilliga xiga ee soo socda.
Boxwood: gooyo xilliga dayrta, ma lagama maarmaan? Dhirta soo bixidda ayaa soo saaray si loo siiyo qaab ama kaliya qurxinta.
Gudniinka ayaa la sameeyaa celcelis ahaan hal mar bishii, laakiin waxaa badanaa suurtogal ah in badanaa. Tan waxaa la samayn karaa laga bilaabo May ilaa dhammaadka Sebtembar, muddada koritaanka firfircoon.
Isla markiiba jiilaalka ka hor xoqidda maaha mid macquul ah. Ka dib markii la gooyey, waraabinta waa inay ka sii badan tahay si ay dhirta u soo kabato si ka wanaagsan.
In unugyada sanduuqyada waxaa ku jira sunta dhirtakan ugu sarreeya ee ku jira caleemaha.
Si looga fogaado sumowga, waxaa lagama maarmaan ah in la xasuusto xeerarka badbaadada markii la gudo. Xiro gacmo-gashi gacan-qabasho ah oo ku jira gacmahaaga iyo maqaarka si aad u fiican ka dib qaabsocodka.
Waxaa loo oggol yahay in ay huuriyaan oo keliya duurka, da'da 2 sanooo leh xididdooyin ku filan. Waa wax aan loo baahnayn in hawadu kululaato, tani waxay keentaa gubasho talooyinka caleemaha. Isla markiiba ka dib markii la baadho baadiyaha waa in si ballaaran loo waraabiyo, oo sidaas daraaddeed biyaha ayaa ku dhacaya caleemaha. Biyaha, waxaad ku dari kartaa dhar si aad u kicin karto koritaanka.
Waxa kale oo aad ka abuuri kartaa dallacaad ka timid dhirtaas (macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan tiknoolajiyada abuuritaanka duufaan ka sanduuqa, dhismaha dhirta iyo jarista ayaa laga heli karaa halkan)
Ka hor inta jiilaalka dhirta u baahan tahay waraabinta digtooni leh, laakiin bacarimiso ka dib September waa mid aan loo baahnayn.
Sanduuqa waa mid u diirran yahay u dhaxeysa, laakiin gobollada leh qaboobaha daran, waxaa fiican in lagu daboolo laamiyo dhogorta dhogorta ama ceyrinta. Kuuraha yaryar waxaa si fudud loogu dabooli karaa sanduuqyada alwaaxda. Tani waxay u oggolaan doontaa in dhirta ay si guul leh u gudubto, iyo gu'ga si ay ugu raaxaystaan ​​indhaha oo leh muuqaal aan caadi ahayn.